थाहा पाईराखौँ ! यी ४ राशि भएका मान्छेले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैनन् ! - Sabal Post
यस्ता ४ व्यक्तिसँग कहिलै धन टिक्दैन गलत जीवनसाथी- यदि जीवनमा कोही गलत मानिसको प्रवेश भएमा तपाईको जीवन अवश्य खराब हुन्छ । तपाईको जीवन बर्बाद हुने निश्चित हुन्छ । रामचरितमानसको अनुसार जसले आफ्नो साथीलाई धोका दिन्छ, ति मानिसहरूलाई जीवनभरि पैसाको कमी रहन्छ ।
लालची गर्नु- जो व्यक्ति सधैँ धनको लोभ गर्छ, उसलाई सधैँ पैसाको कमी रहन्छ । रामचरितमानस मा भनिएको छ कि जो मनिस धनको पछाडी भाग्छ, उनीहरू कहिलै धनी हुन सक्दैनन् ।
बढी घमण्ड गर्नु- हामीले कहिलै कुनै पनि चीजको घमण्ड गर्नु हुँदैन । सधैँ दोस्रो व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । रामचरितमानसको अनुसार जो व्यक्ति आफूलाई सधैँ अरू भन्दा बढी समझदार ठान्दछ, उसलाई सधैँ पैसाको कमी रहन्छ र यस्ता मानिस कहिलै धनी हुन सक्दैनन् । नशायुक्त पदार्थको सेवन- यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा होकी जुन मानिसलाई नशायुक्त पदार्थको लत लागेको हुन्छ, उनीहरूको जीवन नष्ट हुन्छ । यस्ता व्यक्ति प्रति कहिलै लक्ष्मीको कृपा रहँदैन ।
क्ञ्चन गाउपालिकामा राहत बितरण,१ हजार बिपन्न घरपरिवारले…
गरुड पुराणमा भनीएको छ झुटो बोल्ने नरक…
यी हुन् धनलाभ हुने २१ वटा संकेतहरु
बुटवल उपमहानगरपालिकाको चौैथो नगर सभा आजदेखि सुरु
साउन देखि इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशत बढ्ने